Ingxenye: Imfashini 2022 Julayi
Imfashini 2022, Julayi
Ingabe uqinisekile ukuthi awuyena umuntu we-shopaholic? Izimpawu namaqiniso angalindelekile (2022)
Ukuthengela abesifazane kuyingxenye ebalulekile yokuphila. Abanye baze babe ama-shopaholics angapheli, okuthi, ngeshwa, abhekwe njengohlobo lokuphazamiseka kwengqondo
Amasudi ehlobo 2021: ukushintsha ama-sundresses nezingubo zakusihlwa (2022)
Owesifazane nemfashini: Izindlela ezingu-5 eziphezulu zokugqoka izingubo zezemidlalo nsuku zonke (2022)
Izingubo zezemidlalo sekuyisikhathi eside ziyingxenye ebalulekile yeminsalo yethu yansuku zonke. Sizokutshela ukuthi umhlaba wemfashini uluka kanjani kahle ezemidlalo "ekubukeni" kwethu futhi sikubonise ukuthi yini okufanele ugqoke ngayo izingubo zezemidlalo. Futhi kholwa kimi, hhayi ama-sneakers nama-sweatpants kuphela azofika
Indlela yokuhlanza amateki amhlophe ukuze abukeke emisha (2022)
Amateku amhlophe ayinkambiso eqondile kulo nyaka. Ziyinsimbi, zikhanya, zihle futhi zilingana kokubili i-jeans nengubo. Kubukeka sengathi amateku amhlophe awanawo nhlobo amaphutha
Uzigcina kanjani zifudumele kulekwindla: iqoqo elisha lezicathulo nezingubo ze-Born2be Senses (2022)
Lokhu kuwa, i-Born2be yembula iqoqo le-Born2be Senses ekwindla-ebusika, elithwetshulwe e-Iceland, esiqhingini seqhwa nemvelo engonakalisiwe
Ama-Chunky sneakers: indlela yokugqoka lo mkhuba futhi ubukeke njengabesifazane entwasahlobo (2022)
Okukodwa okutuswayo: U-Katya Osadchaya waba yimodeli yeqoqo lika-Andre Tan le-autumn capsule (2022)
Umethuli we-TV u-Katya Osadchaya ukhumbule intsha yakhe yokumodela - futhi waba ubuso beqoqo elakhiwe ngokubambisana no-Andre Tan. I-autumn capsule u-AndreTan X Katya Osadchaya wathola igama elithi Timeless
I-Life hacks evela ku-stylist: ungafunda kanjani ukuthenga okulungile ngenkathi uthenga (2022)
Kwabanye, ukuthenga kuwukuzilibazisa okumnandi, kwabanye kusebenza ngesitayela somuntu ngamunye. Ungakwenza kanjani ukuthenga ngendlela efanele futhi wenze le nqubo ibe mnandi futhi ikhiqize ngangokunokwenzeka, sabuza u-Elena Mudrenko u-stylist odumile
Isitayela: ungakuhlukanisa kanjani ukubukeka kwakho emizuzwini emi-5 (2022)
Ukuthuthukiswa okulula: ukufunda isitsotsi sentsha nokuvuselela ikhabethe no-Andre Tan (2022)
Umculi u-Andre Tan waqamba kabusha u-Andre Tan Kids waba ngu-Andre Tan Easy futhi wenza i-blogger edumile nomlingisi u-Anna Trincher waba ubuso beqoqo lakhe elisha lentsha
Izoba yini imfashini yesikole ekwindla-ebusika 21/22: ubukhulu obukhulu kanye ne-unisex yentsha (2022)
Namuhla, kunezitayela eziningi ezahlukene zemifaniswano yesikole ezingabukeki nje zicocekile futhi ziqinile, kodwa futhi zinesitayela. Kulesi sihloko, sizokutshela ukuthi yimiphi imifaniswano yesikole yemfashini ekwindla-ebusika 2020-2021 nokuthi ungayikhetha kanjani ngendlela efanele
I-wardrobe efanelekile: indlela yokubeka ama-accents esithombeni ngendlela efanele (2022)
Ukuze ungabonakali njenge-parrot ekhanyayo emhlabeni, udinga ukukhumbula imithetho elula yezimpawu ezifanele ezingutsheni. Ikakhulukazi uma isithombe sihlangene kusuka ezintweni eziyisisekelo ezilula. Indlela yokwenza kahle - kusho umenzi wesithombe se-stylist
Amathrendi eNtwasahlobo / Ehlobo lango-2021: Ukujwayela Izinketho Ezingajwayelekile Zokugqoka (2022)
Imisebe yelanga yokuqala ekhanyayo, amaconsi okuqala avela ophahleni, amaqabunga okuqala … Izohlangana kanjani nathi inkathi entsha yemfashini entwasahlobo-ehlobo 2021. Sizokutshela ukuthi sizohlangana kanjani entwasahlobo nasehlobo
Umehluko phakathi kwezinto ezithandwayo neziyisisekelo ze-wardrobe: izibonelo ezivela ku-stylist (2022)
Akuwona wonke amantombazane aqondayo ukuthi yiziphi izinto eziyisisekelo, kungani ngamunye wethu ezidinga nokuthi ngokuvamile zisebenza kanjani ku-wardrobe. Uma ungakwazi ukuzakhela izimpendulo zale mibuzo, u-stylist wethu ukulungiselele ishidi lokukopela elinemininingwane
Indlela yokukhetha ubucwebe obufanele ebusweni bakho ukuze bahlobise ngempela (2022)
Ubucwebe buyingxenye ebalulekile yekhabethe lamantombazane nabesifazane besimanje. Kodwa ukuze lezi zesekeli ziqinisekise ngokugcwele amathemba abekwe kuzo, kuyadingeka ukwazi ukugqoka ngendlela efanele
Indlela yokuchaza nokukhetha isitayela sakho sokugqoka ukuze ubukeke uphelele (2022)
Ukugqoka kahle kuwubuciko. Ithalente lingaxhunyelelwa kusukela ebuntwaneni, noma lingakhula impilo yonke. I-Stylist ikhuluma ngendlela yokuthola isitayela sakho futhi ubukeke uphelele
Indlela yokuveza imizwa yakho ngombala wezingubo: ukudala isithombe esivumelanayo (2022)
Imibala yezingubo ingashintsha isimo sethu sengqondo kanye nombono wethu ngabanye. I-stylist yethu yatshela ukuthi umbala othile ungavusa imizwa, kanye nendlela yokudala isithombe esivumelanayo nokuqinisekisa isimo esihle sengqondo
Yiziphi izingubo ezizokwenza izinqe zibe zincane: amaqhinga nezibonelo zesitayela (2022)
Uma usuwazi ngokucacile amaphutha omfanekiso wakho, bese udlulela enkingeni elandelayo - ukuthi ungayilungisa kanjani ngendlela efanele. I-stylist yethu ikutshela ukuthi yini okufanele uyigqoke ukuze wenze izinqulu zakho zibe zincane
Izimpawu eziyisi-6 eziphezulu ezinikeza ukuntula ukunambitheka kwezingubo (2022)
Ungasebenzisa imali eningi ku-wardrobe yakho ngaphandle kokuthola imiphumela oyifunayo. Siyazi izimpawu ezingu-6 zokuntuleka kokunambitha ezingutsheni - zihlole wena. Futhi ungenzi amaphutha afanayo lapho ukhetha ikhabethe lakho
Yiziphi izingubo zangaphandle zentwasahlobo ka-2021 ezizoba semfashinini: izithombe ezikhanyayo nemibono yemfashini (2022)
Izingubo zangaphandle eziyimfashini zentwasahlobo ka-2021 ziyizixazululo ezintsha, izitayela nezikhombisi-ndlela. Kule ndaba, uzothola umhlahlandlela ophelele we-wardrobe eyisisekelo yasentwasahlobo enesithombe. Siqoqe izibonelo zezingubo zamanje nezitayela zemfashini zalabo abathanda izinto ezintsha
Ungakhetha kanjani i-jeans ephelele ngaphandle kokuphula ikhanda lakho? (2022)
Kanye kanye, sithola ukuthi ungayithola kanjani imodeli yakho efanelekile + umhlahlandlela wezitayela ezifanele kakhulu zesizini kusuka kusitayile wase-Ukraine! Zibheke eduze, funda izincomo zethu bese uqala ukusesha
Ngabe i-skirt yamanje ene-pleated ibukeka kanjani futhi iyiphi indlela engcono kakhulu yokuyigqoka? (2022)
Abantu abaningi bathanda iziketi ezinemiphetho ngaphandle kokubhekisela kusizini noma imfashini eshintshayo. Sizokutshela ukuthi ungaphazamisi kanjani ngokukhetha isiketi esifingqiwe nokuthi yini okufanele ugqoke ngaso ngo-2021 ukuze ubukeke usesitayeleni
Izingubo ezinamachashazi: isitayela noma insalela yesikhathi esidlule? (2022)
"Ama-peas" athandwayo awazange ashiye izikhundla eziphezulu iminyaka eminingi, ehlala eyiphethini yokuqala yabesifazane abaningi. Yini ephawulekayo ngokuphrinta kwamachashazi emfashini we-polka ezingutsheni, futhi yini eyenza "ichashazi le-polka" elifashisayo lidume kangaka ngo-2021 - funda kuwebhusayithi yethu
Yiziphi izindwangu nokuthungwa esizozigqoka entwasahlobo ka-2021? (2022)
Yiziphi izindwangu ezisemfashinini ngo-2021? Ikhwalithi ephezulu, ekhanyayo, i-monochromatic noma ehambisana nesikhathi, ukuphrinta kwe-laconic. Umhlahlandlela ophelele wamathrendi entwasahlobo ka-2021 - yithole kuwebhusayithi yethu
Ungawagqoka kanjani amateku amhlophe nanemibala emfashini entwasahlobo ka-2019 (2022)
Ama-sneaker kudala ayeka ukuba yizicathulo zezemidlalo kuphela futhi anezithende ezixoshiwe ekuphileni kwethu kwansuku zonke. Ngaphezu kwalokho, zingagqokwa isikhathi eside, zombili ngezingubo ezilula namasudi ebhizinisi
Imfashini ye-lipstick shades yansuku zonke (2022)
I-lipstick yemfashini yansuku zonke: i-lipstick epholile kunazo zonke, i-trendiest lipstick wonke umuntu kufanele azame
Yimaphi ama-sneakers uKate Middleton athanda ukuwagqoka (2022)
Isitayela sezemidlalo sikaKate Middleton: yimaphi amateki uDuchess Kate Middleton athanda ukuwagqoka ekuphileni kwansuku zonke nasekuqeqesheni nokuthi kungani singawakhokhela
Iyiphi ingubo, kanye namateki amabi kanye nejezi likagogo, okuzoba inkambiso ka-2019 (2022)
Njengoba umhlaba uyahlanya enkambweni yamashumi amathathu eminyaka adlule, izinto eziyinqaba zivela zivame ukuvela njalo. Into esemqoka ukuthi akekho ongaziphathi kahle futhi ngokwethembeka ubiza ama-sneakers amakhulu, ijezi elinezinyamazane, futhi manje le ngubo "yabesifazane abakhulelwe"
Imibono engu-6 yokwenza ikhabethe lakho elivamile lasehlobo libe nemfashini futhi libe nesitayela (2022)
Bambalwa abantu abangakwazi ukuvuselela ngokuphelele ikhabethe labo lesizini. Yebo, lokhu akudingekile, uma ugcina unolwazi ngamasu emfashini kakhulu ehlobo lika-2019
Okufanele ugqoke ngeziketi ze-midi: 8 inhlanganisela yemfashini yazo zonke izikhathi (2022)
I-midi skirt iyintandokazi kule nkathi. Yini okufanele ugqoke ngesiketi esinjalo semfashini entwasahlobo nasehlobo 2021? Silungise iziketi ze-midi ezinesitayela esiyisi-8 esingazizama
Izinto ezingu-7 eziphezulu zokuvalelisa kuzo kanye unomphela (2022)
Udinga ukubuyekeza njalo ikhabethe lakho - liyakujabulisa, lithuthukisa izinga lakho lokuphila futhi likusiza ukuhambisana nemfashini. Sicele umenzi wesitayela ukuthi asenze uhlu oluphelele kakhulu lwezinto okungafanele zisagqokwa
Inhlanganisela yemfashini kakhulu: indlela yokugqoka ingubo ngamabhulukwe (2022)
Isitayela sasehlobo sango-2021 yizingubo ezimfushane, ezinde ezinamajini noma amabhulukwe. Sihlanganise umhlahlandlela wezinhlanganisela ezifashini kakhulu zezingubo namabhulukwe ngokubukeka okukodwa, okwethulwa abaklami emaqoqweni esizini yasehlobo ka-2021
Amathiphu Ngemfashini: Ungawakhetha Kanjani Ijeans Elungile Yabesifazane (2022)
Ngezinye izikhathi kunzima kakhulu ukukhetha i-jeans efanele. Uma usesimweni esinjalo, sebenzisa amathiphu ethu ukuze ngokuzayo wazi ukuthi ungakhetha kanjani i-jeans yabesifazane efanele ngobukhulu, ubude nesitayela
Ama-accents welineni ekugqokeni okungajwayelekile noma ukuthi ungangeza kanjani ukucwebezela ekubukeni kwakho? (2022)
Esiqongweni sokuthandwa yisitayela selineni ezingutsheni, okuthi, ngenhlanganisela efanele, sibukeke simangalisa hhayi nje njengengxenye yokubukeka okuphelele, kodwa futhi ekuphileni kwansuku zonke. Ake sibone ukuthi yiziphi izindlu zemfashini ezidume kakhulu ezisinikeza ukuba sizigqoke
Amapheya angu-7 ezicathulo wonke umuntu azozigqoka entwasahlobo ka-2021 (2022)
Silungiselela kakhulu ukufika kokushisa futhi sifunda amathrendi amakhulu ka-2021. Namuhla, kugxilwe ezicathulweni. Thola yonke imininingwane mayelana nezicathulo ezihamba phambili zentwasahlobo ka-2021 ezintweni zethu
Indlela yokugqoka isitayela sowesifazane entwasahlobo nasehlobo 2021: uhlu lokuhlola lwezinto ezisemfashini (2022)
Ake sithole ukuthi ayini amathrendi emfashini entwasahlobo-ehlobo lika-2021 yabesifazane. Sizobona ukuthi yimiphi imibala, ukwakheka kanye nezitayela ezizosebenza entwasahlobo nasehlobo, futhi senze uhlu lokuhlola lwezinto ezi-TOP-8 zesitayela
Ikhabethe le-capsule: ungahlanganisa kanjani isethi yezingubo eguquguqukayo yentwasahlobo ka-2021 (2022)
Ufuna ukwakha ikhabethe lakho le-capsule. Kodwa awuqiniseki ukuthi ungaqala kuphi? I-athikili yethu izoba unkulunkulukazi wakho wenganekwane omlingo ozokusiza ukuthi udale ikhabethe elihle lazo zonke izikhathi
Amagajethi ama-4 wonke umuntu wesifazane wesimanje awadingayo (2022)
Izesekeli zemfashini namuhla azizona izikhwama namabhande kuphela. Esikhathini sobuchwepheshe obuphezulu, amagajethi aba enye yezesekeli eziyinhloko zowesifazane wesimanje
Ukuhlanza ikhabethe lakho: Izinto ezi-TOP-6 okudingeka uzisuse ngokushesha (2022)
Lapho sihlala sodwa, sonke asazi kangcono hhayi kuphela okuqukethwe amakhanda ethu, kodwa futhi amakhabethe. Sithole ku-stylist ukuthi yiziphi izinto ezengeziwe okufanele uzilahle futhi uthulule ikhabethe lakho, ukuthi uzibeke kuphi nokuthi ungakhuli kanjani ngodoti omusha
Ungayithola kanjani i-pantsuit ephelele ukuze uzizwe ungowesifazane futhi ukhululekile (2022)
Isudi yebhulukwe efanelekile iyi-investment engcono kakhulu ekhabetheni labesifazane eliyisisekelo. Sizokutshela ukuthi ungakhetha kanjani i-pantsuit isinyathelo ngesinyathelo esizokujabulisa isikhathi eside kunenkathi eyodwa yefashini noma impilo yakho yonke
Izingubo ezingu-15 ezinhle kakhulu ezimnyama ezivela ezinkanyezini eziphuma kukhaphethi obomvu we-Golden Globes ka-2018
Ungawugqoka kanjani umbala onsomi othrendayo ngo-2018: Isitayela esingu-9 sibukeka kukho konke ukunambitheka
Ungabukeka kanjani umangalisa ngejezi elithokomele ekwindla ka-2019
Idume amahora angu-24
Izinto zesikole 90s
Imibono eyi-10 ekhuthazayo yokushintsha amakamelo okulala amancane
Amathiphu angu-5 awusizo ohambo olujabulisayo lwe-visa-free
Izitsha ezi-5 okufanele uzame uma uhamba ngaphandle kwe-visa
Intombazane yayingafuni ukufunda izincwadi, futhi ubaba weza nendlela yokuqala yokuphuma
Indlela yokulungisa isikhumba sakho ekwindla
Izinketho ezingu-10 eziphawulekayo zokuthi ungahlobisa kanjani izindonga endlini yokugezela engavamile
Izimpahla zasehhovisi eziyi-15 ezizokumangaza
U-Vitaly Kozlovsky utshele lapho ehamba nomshado noRamina
U-Nikolay Tishchenko wabelane ngezithombe ezicacile zosuku lwakhe lokuzalwa
Thatha isibonelo ezinkanyezini ukuthi ungagqoka kanjani futhi ugqoke umhlophe ehlobo
U-Jennifer Lopez wamangala ngengubo enomugqa ojulile wentamo kanye nomkeke ethangeni
Indlela yokugqoka iminyuzi yemfashini ukuze ubukeke isitayela kuleli hlobo
U-Elena Kravets wabuyela esiteji futhi watshela ukuthi uhlanganisa kanjani umama nomsebenzi
Ubuhle basebukhosini: Izingubo ezi-6 zikaKate Middleton eziwayo
Izimfihlo ezi-7 zesitayela nendlela yokuphila ka-Laetitia Kasta oneminyaka engama-39
ImfashiniUkufaneleka kanye nempiloIndlela yokuphilaPsychologyBonisa IbhizinisiUbuhleUmshado